VaBiti Vanoyambira Kuti Munyika Munogona Kudeuka Ropa Mukaitwa Sarudzo
Gurukota rinoona nezvehupfumi, varizve munyori mukuru weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaTendai Biti, vayambira kuti pachaita kudeuka kweropa nyika ikaita sarudzo pari zvino.
VaBiti vakataura mashoko kukambani yenhau yeAFP muJohannesburg kuSouth Africa, uko kune musangano wekuwanisa vanhu zvokudya.
VaBiti vanoti United Nations, SADC neAfrican Union, dzinofanirwa kurega tsika yekumirira kuti patange paitika hondo dzozopindira. Vati zvakakosha kuti masangano aya agare agadzirira kudzivirira mhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mashoko aVaBiti anouya apo paine mashoko ekuti masoja nevakarwa hondo yerusunungukoa, vatopinda munzvimbo dzakawanda zvikuru kumaruwa. Nzvimbo dzanzi dzaberekera ingwe iMidlands, Manicaland, Masvingo neMashonaalnd Central.
Gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika, VaEmmerson Mnangagwa, vari kufambawo vachiita misangano vachivhundutsira vanhu.
Chipangamazano chemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, Muzvare Lindiwe Zulu, avo vari kuyedza kuyananisa mapato emunyika, vanoti nyaya yemhirizhonga yakasvika munzeve dzavo uye vari kuyedza kuigadzirisa.
Gurukota rezvevechidiki uye vari nhengo yeZanu-PF, VaSavior Kasukuwere, vanoti MDC iri kutya sarudzo uye ndiyo yakauya nemhirizhonga yezvematongerwo enyika, vachiti munyika manga makagadzikana apo MDC yakanga isati yapinda mune zvematongerwo enyika.
Asi mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vanoti Zanu-PF inozivikanwa nenyaya yekumanikidza vanhu kuti vaivhotere, izvi zviri kupa kuti iite zvemhirizhonga pose panopihwa vanhu mukana wekupa pfungwa dzavo vakasununguka.